Usilika: Guqula Idatha namaSpredishithi Kube Ukubukwa Okushicilelwe | Martech Zone
NgeSonto, ngoJulayi 19, i-2015 NgeSonto, ngoJulayi 19, i-2015 Douglas Karr
Wake waba nesipredishithi esasineqoqo elimnandi ledatha futhi wafuna nje ukusibona ngeso lengqondo - kepha ukuhlola nokwenza ngezifiso amashadi akhelwe ngaphakathi kwe-Excel kwakunzima kakhulu futhi kudla isikhathi? Kuthiwani uma ufuna ukwengeza idatha, ukuyiphatha, ukuyilayisha futhi wabelane ngalokhu kubonwa?
Ungakwazi nge Silk. Usilika uyipulatifomu yokushicilela idatha.
Amasilika aqukethe idatha esihlokweni esithile. Noma ngubani angadlulisa amehlo kusilika ukuze ahlole idatha futhi adale amashadi amahle asebenzisanayo, amamephu namakhasi ewebhu. Kuze kube manje, izigidi zamakhasi kaSilika zenziwe.
Vakashela le Amanethiwekhi Omphakathi Aphezulu Ayishumi nanhlanu Usilika wokubuka, wabelana noma ngisho nokushumeka ukubonwa okwenziwe kusuka kuleli qoqo ledatha. Nansi ukushumeka okubukhoma kweshadi lebha lezibalo zomsebenzisi:
Idatha evela ngobaba.silk.co
Yenza amadokhumenti asebenzisane - Esikhundleni sokuthumela ama-PDF ama-static, amaspredishithi noma izixhumanisi ezivela ku-Google Amadokhumenti, sebenzisa iSilk ukwenza isiza esisebenzisana ngokuphelele esibandakanya abasebenzisi futhi sibakhuthaze ukuthi badlale ngemininingwane yakho.
Shumeka idatha yokusebenzisana noma yikuphi - Thatha ukubonwa kwakho kukasilika futhi ukusebenzise kuyo yonke iwebhu. Zishumeke ku-Tumblr, WordPress, nakwamanye amapulatifomu amaningi wokushicilela.
Faka amathegi ukwenza umsebenzi wakho uhleleke ngokuphakathi, ngesitayela, noma nganoma yisiphi isigaba osikhethayo. Ngokungeza idatha yendawo, ungakha futhi amamephu.
Ukubeka Silk ukusebenzisa, ngithumele amazinga wethu wegama elingukhiye kusuka ku- Semrush futhi ngakha ngokushesha ukubonwa okungivumela ukuthi ngihlele ukuhleleka futhi ngibuke amagama angukhiye lapho nganginezikhundla ezithile eziphakeme futhi kwakukhona ithani levolumu yokusesha… ngokuyisisekelo ukungazisa lapho ukwenza okuthile nokukhuthaza kungashayela khona ithrafikhi eningi kakhulu. Ngingakwenza lokhu ngokuhlunga nokuhlunga idatha… kepha ukubona ngeso lengqondo kuyenze yagqama kakhulu!
Tags: ukushicilela idathaipulatifomu yokushicilela idathaUkubonwa Kwedathaipulatifomu yokubona idathausilikausilika